जलविद्युत भनेको के हो: विशेषता र जलविद्युत स्टेशन हरियो नवीकरणीय
जलविद्युत् ऊर्जा भनेको के हो
जर्मन पोर्टिलो | | हाइड्रोलिक उर्जा
विश्वमा नवीकरणीय उर्जाका धेरै प्रकार छन् र प्रत्येकको आ-आफ्नै अपरेट हुन्छ। लक्ष्य उही हो: केही असीमित भूमि स्रोतहरूको प्रयोग गरेर शून्य ग्रीनहाउस ग्यास उत्सर्जनको साथ स्वच्छ उर्जा उत्पादन गर्न। यस अवस्थामा हामी के कुरा गर्ने छौं जलविद्युत.
यस लेखमा हामी तपाईंलाई हाइड्रोइलेक्ट्रिक उर्जा भनेको के हो, यसको विशेषताहरू के हुन्, कसरी उत्पादन गरिन्छ र यसको फाइदा र बेफाइदा के हो बताउन जाँदैछौं।
1 जलविद्युत् ऊर्जा भनेको के हो
2 एक जलविद्युत स्टेशनको पार्ट्स
3 जलविद्युत उर्जा संयंत्रहरूको प्रकार
4 स्पेनमा जलविद्युत
जलविद्युतले नदीको ओछ्यानको निश्चित उचाइमा पानीको सम्भावित उर्जालाई नदीको ओछ्यानको तल्लो बिन्दुमा र यांत्रिक ऊर्जामा परिणत गर्न र अन्ततः विद्युतीय उर्जामा प्रयोग गर्दछ। पानीको शक्तिलाई बिजुलीमा रूपान्तरण गर्दछ। यो उर्जा प्रयोग गर्न, ठूलो मात्रामा पानी संरक्षण पूर्वाधार अधिकतम बनाउन निर्माण गरिएको छ यस स्थानीय, नवीकरणीय र उत्सर्जन-मुक्त स्रोतको क्षमता.
एक जलविद्युत् प्लान्ट भनेको इलेक्ट्रोमेकानिकल सुविधाहरू र उपकरणहरूको सेट हो जुन आवश्यक जलविद्युत् ऊर्जालाई विद्युत् ऊर्जामा रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ र दिनको २ 24 घण्टा सञ्चालन गर्न सक्छ। उपलब्ध बिजुली ऊर्जा पानीको प्रवाह र झरना को उचाई को समानुपातिक छ।
संसारमा सबैभन्दा धेरै जलविद्युत स्टेशन हो तथाकथित «केन्द्रीय जलाशय»। यस प्रकारका बोटहरूमा पानी बाँधमा स accum्कलन हुन्छ र त्यसपछि टर्वाइन भन्दा माथिबाट तल झर्छ, जसले टर्वाइन घुमाउँछ र नेसेलमा अवस्थित जेनरेटरबाट बिजुली उत्पादन गर्दछ। त्यसपछि यसको भोल्टेज ठूलो घाटा बिना ऊर्जा हस्तान्तरण गर्न खडा गरिएको छ र त्यसपछि ग्रिडमा थपियो। अर्कोतर्फ, प्रयोग गरिएको पानी यसको प्राकृतिक प्रक्रियामा फर्किन्छ।
अर्को तरिका हो "एक्सचेन्जहरु पारित गर्नु"। यस किसिमका बोटहरूले नदीको प्राकृतिक ढलानको फाइदा लिन्छन्, र त्यसपछि पानीलाई बोटबिरुवामा स्थानान्तरण गर्दछन्, जहाँ टर्वाइनहरू ठाडो हिंड्न सकिन्छ (यदि नदीमा ठाडो ढलान छ भने) वा तेर्सो (यदि ढलान कम छ भने) ती जस्तै बिजुली उत्पादनको बाटोमा एक जलाशय प्लान्ट। यस प्रकारका फ्याक्ट्रीहरू निरन्तर सञ्चालन गर्दछन् किनकि उनीहरूसँग पानी भण्डारण क्षमता छैन।
एक जलविद्युत स्टेशनको पार्ट्स
जलविद्युत प्लान्टले निम्न भागहरू समावेश गर्दछ:
बाँध: यो नदी उत्पादन रोक्न र पानीको शव राख्नु (उदाहरणका लागि जलाशय) कन्टेन्ट हुनु अघि जिम्मेदार छ, ऊर्जा उत्पादनको लागि प्रयोग गरिएको पानीमा भिन्नता सिर्जना गर्न। बाँधहरू माटो वा क concrete्क्रीटबाट (सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने) बनेको हुन्छ।
स्पिलवे: तिनीहरू आंशिक रूपमा रोकिएको पानी इञ्जिन कोठालाई बाइपास गरेर मुक्त गर्नका लागि जिम्मेवार छन् र सिंचाई आवश्यकताहरूको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। तिनीहरू बाँधको मुख्य भित्तामा अवस्थित छन् र तल वा सतह हुन सक्छन्। पानी खस्दा क्षति हुनबाट जोगाउन बाँधको खुट्टामा बेसिनमा प्रायः पानी हराउँछ।
पानी सेवन: तिनीहरू अवरुद्ध पानी स collecting्कलन गर्न र च्यानल वा जबरजस्ती पाइपहरूको माध्यमबाट यसलाई मेशीनमा सार्न जिम्मेवार छन्। पानी इनलेटसँग टर्बाइनमा पुग्ने पानीको मात्रा र अन्य वस्तुहरू (लगहरू, हाँगा, आदि) रोक्नको लागि फिल्टर फिल्टर गर्न ढोका छ।
इलेक्ट्रिक पावर प्लान्ट: मेशिनहरू (उत्पादन टर्बाइनहरू, हाइड्रोलिक टर्बाइनहरू, शाफ्टहरू र जेनरेटरहरू) र नियन्त्रण र नियमन तत्वहरू यहाँ अवस्थित छन्। यससँग मर्मतको क्षेत्र छोड्नका लागि प्रवेश र बाहिर निस्किने ढोका छन् र मर्मत वा पृथक नहुँदा पानी बिना।
हाइड्रोलिक टर्बाइनहरू: तिनीहरू पानीको उर्जा प्रयोग गर्न जिम्मेवार छन् जुन यसबाट बग्ने पानीको अक्ष यसको माध्यमबाट घुमाउने आन्दोलन उत्पन्न गर्नका लागि हो। त्यहाँ तीन मुख्य प्रकारहरू छन्: पेल्टन व्हीलहरू, फ्रान्सिस टर्बाइनहरू, र क्यापलान (वा प्रोपेलर) टर्बाइनहरू।
ट्रान्सफार्मर- एक विद्युतीय उपकरण पावर कायम राख्दा एक वैकल्पिक वर्तमान सर्किट को भोल्टेज बढाउन वा घटाउन प्रयोग।
शक्ति प्रसारण लाइन: एक केबल जसले उत्पन्न गरिएको ऊर्जा प्रसारित गर्दछ।
जलविद्युत उर्जा संयंत्रहरूको प्रकार
विकासको प्रकारमा निर्भर गर्दै जलविद्युत बोटहरूलाई तीन प्रकारमा विभाजन गर्न सकिन्छ:
रनऑफ जलविद्युत प्लान्टहरू: यी जलविद्युत बिरूवाहरूले वातावरणीय अवस्था र टर्वाइनहरूको उपलब्ध बहावमा निर्भर नदीहरूबाट पानी स collect्कलन गर्छन्। पानी क्षेत्रहरु बीच असमानता सानो छ, र ती केन्द्रहरु हुन् जसलाई निरन्तर बहाव चाहिन्छ।
जगेडा जलाशयहरूको साथ जलविद्युत प्लान्टहरू: यी जलविद्युत बोटहरूले बाँधमार्फत जलाशय "अपस्ट्रीम" को एक निश्चित खण्ड प्रयोग गर्दछ। नदीको प्रवाह जस्तोसुकै भए पनि, जलाशयले पानीको मात्रा टर्वाइनबाट अलग गर्छ जुन वर्षभरि बिजुली उत्पादन गर्दछ। यस प्रकारको फ्याक्ट्रीले अधिक ऊर्जा प्रयोग गर्न सक्दछ र केडब्ल्यूएच सामान्यतया सस्तो हुन्छ।
जलविद्युत पम्पिंग स्टेशनहरू: यी जलविद्युत प्लान्टहरूमा पानीको विभिन्न स्तरका दुई भण्डारहरू छन्, जुन अतिरिक्त ऊर्जाको आवश्यक पर्दा प्रयोग गरिन्छ। माथिल्लो जलाशयबाट पानी टर्वाइन हुँदै तल्लो जलाशयमा जान्छ र माथिल्लो जलाशय पम्पि water पानीमा फर्कन्छ जब दिनमा ऊर्जाको माग कम हुन्छ।
प्राविधिक प्रगतिले माइक्रोहाइड्रोलिक उर्जा स्रोतहरूको परिणाम दिन्छ बिजुली बजारमा प्रतिस्पर्धी लागत भएको छ, यद्यपि यी लागतहरू बिरुवाको प्रकार र कार्यहरू अनुसार फरक हुन्छन्। यदि एक पावर प्लान्टको स्थापना गरिएको शक्ति १० मेगावाट भन्दा कम छ र यो पानी वा खोलामा खडा हुन सक्छ, पावर प्लान्टलाई एक सानो जलविद्युत संयंत्र मानिन्छ।
आज, स्पेनिश जलविद्युत क्षेत्रको विकास बढाउने लक्ष्य राखेको छ अवस्थित सुविधाहरूको प्रदर्शन सुधार गर्न क्रममा दक्षता। यी सिफारिसहरू स्थापित कारखाना मर्मत, आधुनिकीकरण, सुधार वा विस्तारको उद्देश्य हो। हाइड्रोलिक माइक्रोटर्बाइनहरू १० किलोवाट भन्दा कम शक्तिसहित विकसित हुँदैछन्, यी नदीहरूको गतिज शक्तिको फाइदा लिन र एक्लो ठाउँहरूमा बिजुली उत्पादन गर्न धेरै उपयोगी छ। टर्वाइनले प्रत्यक्ष विद्युत् प्रवाहमा विद्युत् उत्पादन गर्दछ र खस्ने पानी, थप संरचनाहरू वा उच्च मर्मत लागतको आवश्यकता पर्दैन।
स्पेनमा अहिले 800०० भन्दा बढी जलविद्युत प्लान्टहरू छन्। त्यहाँ २०० भन्दा बढी मेगावाटको २० पावर प्लान्टहरू छन्, जसले कुल जलविद्युत उत्पादनको %०% प्रतिनिधित्व गर्दछ। अर्को छेउमा, स्पेनमा दर्जनौं साना बाँधहरू छन् जुन २० मेगावाट भन्दा कमको पावरको छ।
म आशा गर्दछु कि यस जानकारीको साथ तपाईले जलविद्युत ऊर्जा के हो र यसले कसरी काम गर्दछ भन्ने बारे अधिक जान्न सक्नुहुन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: हरियो नवीकरणीय » नवीकरणीय ऊर्जा » हाइड्रोलिक उर्जा » जलविद्युत् ऊर्जा भनेको के हो
थर्मल पावर प्लान्ट के हो?